MongoDB, imwe nzira kuna MariaDB uye zvakajairika SQLs | Linux Vakapindwa muropa
MongoDB mutungamiri wezimwe nzira kune echinyakare SQL dhatabhesi
MongoDB yakavhurwa sosi, yakatarisana negwaro NoSQL dhatabhesi. NoSQL ndiwo madhatabhesi anosiyana neyeiyo yekare modhi SQL zvetsika. Izwi rekuti "NoSQL" rakatanga kushandiswa muna 1998, apo rakagadzirwa naCarlo Strozzi. Zvakanakira izvo zvavanopa zvichienzaniswa neyakajairwa SQL ndeyazvo yakakura yakatwasuka scalability, isingaunze mabhodhoro, kubata yakawanda dhata, ivo havadi masango anodhura, nezvimwe.
MongoDB inouya kubva kuChirungu "humongous" yakanyorwa muC ++ uye yakaburitswa pasi pezenisi Apache. Pane iyo webhusaiti webhusaiti unogona kuwana mabhainari eanoshanda masystem, Linux, FreeBSD, Windows, OS X uye Solaris Kubva kuvambwa kwayo muna2009, kuvandudzwa kwayo kwasvika kune yakagadzika vhezheni 2.4.4, kunyangwe iyo yekuvandudza vhezheni 2.5.0 yatogadzirirwa.
Mamwe mashoko - RedHat haisati yasarudza pakati paMariaDB neMySQL
Kunobva - linuxlinks
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » MongoDB mutungamiri wezimwe nzira kune echinyakare SQL dhatabhesi
Nei chifananidzo kubva kuna MariaDB?
Wilmer Marquez akadaro
Ini zvakare ndine kusahadzika kumwechete, nekuda kwechifananidzo chiri kubva mariadb?
Pindura wilmer marquez
Arch Linux 2013.07.01 inowanikwa kurodha pasi
ffmpeg: nyora yako Linux desktop pasina matambudziko